चुनावसँग जोडिएको काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्र :: चित्र केसी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१९ असार २०७७, शुक्रबार ०९:५२ English
नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । २००७ सालदेखि नेपाली जनताको हकअधिकार, सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, मानवअधिकारका साथै स्वतन्त्र न्यापालिकाका लागि निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी हो । पछिल्लो चरणमा आएर पार्टीको साङ्गठनिक धरातल कमजोर रूपमा देखापर्नु, पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अपनाउँदै आएको सिद्धान्त र एजेन्डालाई बिर्सिंदै जानु, माओवादीको एजेन्डामा पछि लाग्नुजस्ता गलत क्रियाकलापले वर्तमान समयमा आएर पार्टी निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस इतिहास बोकेको पार्टी हो । यस पार्टीका आफ्नै एजेन्डा र सीमाहरू छन् । आफ्ना सीमा र एजेन्डालाई तिलाञ्जली दिँदै अरूको पिछलग्गु भएर समाहित हुने भनेको सिङ्गो पार्टी र नेतृत्व वर्गको ठूलो कमजोरी हो । कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दा र सवालहरूमा प्रस्तुत हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै खालको पहिचान र सिद्धान्त र विकल्पसहित प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो । तर, पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय मुद्दा र सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस विकल्पविहीन र भूमिकाविहीन भएर प्रस्तुत हुँदा सिङ्गो पार्टीलाई नै नोक्सान हुन पुगेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रको सवालमा सबैभन्दा चनाखो र बढी जिम्मेवारी साथ काम गर्नुपथ्र्यो । नेपाली जनताले समेत काङ्ग्रेसमाथि आँखा लगाइरहेको छ– कतै गलत बाटोमा गएर मुलुक, प्रजातन्त्र र पार्टी नै कमजोर हुने त होइन भनेर ।
अब लगभग निर्वाचन हुने सुनिश्चितजस्तै भएको छ र मुलुक तथा जनताका लागि निर्वाचन अपरिहार्य पनि छ । मुलुक निकै लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा प्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा छ । जनताले निकै सास्ती भोग्नुपरेको अवस्था छ । राजनीतिक पार्टीहरूको अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनको कारणबाट मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । जनता निराश र दिक्कवाक्क भएको अवस्था छ । झन् पछिल्लो सिर्जित अवस्थाबाट राजनीतिक पार्टीप्रति नैरास्यता र असफलताको प्रश्न नै उठेको छ । यो अवस्थालाई मलम लगाउन विगतमा गरिएका पार्टीका कमी–कमजोरीप्रति क्षमायाचना गर्दै जनतासामु आफ्नो स्पष्ट चुनावी घोषणापत्र लगेर जनतासामु निश्चित प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा भएको पार्टीको आन्तरिक कमजोरीलाई यथार्थ रूपमा आत्माआलोचना गरी पार्टीलाई गुट–उपगुटबाट अलग गरी लैजानुपर्छ । अब हुने निर्वाचनमा यसको परिणामले नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य र प्रजातन्त्रको दिगोपनसँग जोडिएको छ किनकि अबको चुनावमा पनि उही सत्ताकब्जा र अधिनायकवादको मनसायबाट हिँडिरहेको माओवादीको जित भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रको भविष्य सखाप हुनेछ । यो गम्भीरताले पार्टीले यथोचित तरिकाले समयमा नै बुझेर पार्टीबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने क्रममा जनताको माग र सम्बन्धित व्यक्तिको जनतामा परेको प्रभावलाई विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने जरुरी हुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको हारजितको सवाल भनेको पार्टीले कस्तो व्यक्तिलाई छनोट गर्दछ त्यसमा निर्भर गर्छ । अब हुने निर्वाचनमा पार्टीले सक्षम र जनतामा विशेष प्रभाव राख्ने ७ सय ५ युवा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सक्यो भने पार्टीको जित सुनिश्चित हुन्छ । अहिले नेपाली जनाताको माग भनेको नयाँ अनुहार, नयाँ विचार र सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने नै हो । कतिपय ठाउँमा पुराना नेता र अनुहार आएमा भोट नै नदिने भनेर जनताले भन्न लागिसकेको अवस्था छ । जनता र समयको मागअनुसार नेपाली काङ्ग्रेस जतिसक्दो धेरै नयाँ अनुहार युवा र जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकेको व्यक्तिलाई छनोट गरोस् ।
कुनै पनि नेताको नातावाद, कृपावाद र नेताको वरिपरि घुम्ने र चाकडी गर्नेलाई मात्र फेरि उम्मेदवार बनाइयो भने नेपाली काङ्ग्रेसका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यसो भनेर पुरानो र सङ्घर्ष गरेका नेताजीहरूलाई अपहेलना गर्न खोजेको होइन, उहाँहरू सम्मानित हुनुहुन्छ । उहाँहरूले देश, जनता प्रजातन्त्र र पार्टीको लागि मूल्यवान जीवन खर्च गरिसक्नुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू अब पार्टीको संरक्षक भएर बस्नुपर्छ । पार्टी उहाँहरूलाई सधैँ सम्मान गरिरहनेछ । अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस बीपी बाबुको चिन्तन र आधारले टिकिराखेको छ । पछिल्लो चरणमा नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन निकै कमजोर देखिएको छ । जात, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, महिला, उत्पीडन, मधेसलगायत अन्य विषयमा पनि चर्को आवाज उठिराखेको छ । यसमा पार्टीको स्पस्ट भिजन र पारदर्शिता हुनुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कुनै जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, धर्म र क्षेत्रको आधारमा कसैले आफूलाई अपहेलित भएको अनुभव नगरोस् । यस्ता समस्या छन् भने पार्टीले सबैलाई न्यायको आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । किनकि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको प्रजातन्त्र र समावेशी र समानतामा विश्वास राख्ने पार्टी हो । नेपाली काङ्ग्रेसले अब चुनावमा जाँदा एमाओवादीको नक्कली र सस्तो लोकप्रियताको भण्डाफोर गरेर जानुपर्छ । गगन थापाजस्ता कुनै पनि होनहार युवा नेतालाई पार्टीले निश्चिन्त तरिकाले टिकट दिनुपर्छ । नेपालको अधिनायकवादको नेतृत्व गर्ने तानाशाहको पराजय हुन्छ र प्रजातन्त्रलाई फाइदा हुन्छ भने पार्टीले
किन प्रचण्डविरुद्ध गगन थापालाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने ? अब काङ्ग्रेसमा यस्तो लिडरसिपको खाँचो छ जसले माओवादीको हरेक जालझेल, षड्यन्त्र र उसको कुटिल प्रपञ्चसँग लड्ने आँट र दम राखोस् । यसको लिडरसिप अब डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, नरहरि आचार्य, विमलेन्द्र निधि, चित्रलेखा यादव, गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, मीन विश्वकर्मालगायत नेविसङ्घका पूर्वअध्यक्षहरूलगायत सबैले लिडरसिप लिने आँट गर्नुपर्छ । अब पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू आफ्नो स्पष्ट भिजनका साथ आउन नसक्ने र केवल शीर्ष नेताहरूको मात्र विरोध गरिराख्ने हो भने उनीहरूको काम गर्ने हैसियत र लिडरसिप गर्ने क्षमतामा पनि प्रश्न उत्पन्न हुन जान्छ । युवा नेताहरूमाथि पनि लाचार र कामभन्दा भाषण बढी गरेको आरोप लाग्न सक्छ ।
जे होस्, अब आउने निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार चयन गर्दा युवालाई विशेष मध्यनजर गरेर नयाँ अनुहार र पार्टीमा लगनशिल र जनतामा पहुँच राख्न सफल व्यक्तिलाई छनोट गरोस् । अब नेपाली काङ्ग्रेसको भर विश्वास र भविष्य युवाहरूको काँधमा छ । स्वदेश तथा परदेशमा बस्ने आमनेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको चाहना र भावना पनि यही हो । अब हुने निर्वाचनमा प्रत्येक समुदाय, वर्ग, धर्म, जनजाति, दलित, मधेसी, महिलालगायत सबै वर्गको उल्लखेनीय सहभागिताको जरुरत छ । पार्टीमा कुनै हैसियत नराख्ने जनतामा पनि अलोकप्रिय छवि बनाएका नेताजीहरूले पार्टीले विचार गर्नुपर्छ । नेविसंघ र तरुण दललाई चुनावको समयमा माओवादी र वाईसीएलको गुण्डागर्दीलाई चिर्न सक्ने तरिकाले परिचालन गर्नुपर्छ । यी माथिका विषय र कुराहरूलाई पार्टीले विशेष ध्यान पु¥यायो भने प्रजातन्त्र बलियो हुनाको साथै नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैले कम आँक्न र चुनौती दिन सक्ने छैन । यस विषयमा शीर्ष नेताहरूको गम्भीर ध्यान जाओस् । जय नेपाल ।
२८ चैत्र २०६९, बुधबार ०९:२४ मा प्रकाशित